Shir Madaxeedkii Wakaaladda Warbaahinta Bulshada | Shirka Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah. Juunyo 23, 2021 | Martech Zone
Si ka duwan webinars dhaqameed, Shir Madaxeedka Wakaaladda waxay dareemi doontaa sida dhacdooyinka shaqsiyeed ee aan dhammaanteen u xiisayno. Laga bilaabo awood u lahaanshaha in si fool ka fool ah loola hadlo kuwa hadlaya ka dib soojeedintooda, la kulanka iyo la sheekaysiga ka qaybgalayaasha kale, waxaa jiri doona fursad badan oo daqiiqado sixir ah. Waa kuwan qaar ka mid ah mowduucyada ajandaha:
Sida Loo Dhiso Nidaamka Iibinta ee Miisaanka Leh ee Wakaaladdaada - Ku soo biir Lee Goff maaddaama uu daboolayo 4-ta tiir ee nidaamka iibka ee guuleysta oo la cabbiri karo. Nidaamkiisu wuu laba jibaari doonaa hogaamintaada, dammaanad kama qaadi doono hogaamiye waligiis oo ku dhaca dillaacyada, wuxuu siiyaa maareyn dhuumo faahfaahsan, KPI-da hufan ee waxqabad iyo wax intaa ka sii badan .
Sida loo Miisaamo Miisaanka Wakaaladdaada - Jason Swenk wuxuu ku tusayaa sida aad isku qiimayn lahayd heerka ay wakaaladdaadu tahay, iyo sida saxda ah ee aad u baahan tahay inaad ku qabato heerarka hadda jira iyo kuwa mustaqbalka si aad u kordhiso hay'addaada si dhakhso leh si aad u gaarto shirwaynaha.
Sida loo ordo & loo maareeyo caqabadaha macaamiisha - Kelly Noble Mirabella ayaa hogaamineysa kulankaan kala jabka ah halkaasoo ay ku tusi doonto qaacido ku aaddan socodsiinta caqabadaha sida ugu yar ee dhowr maalmood ama ugu badnaan bil ah. way fududahay in la abuuro loolan layaableh oo kaqeyb gala kuwa raacsan isla markaana ku celiya iyaga inbadan haddii aad taqaano qaaciidada. Sidoo kale waa wax fudud oo ku filan in qof kasta oo shirkaddaada ka mid ah uu sameyn karo - xitaa haddii aadan aqoon u lahayn tikniyoolajiyadda! Waxaa intaa dheer, Kelly ayaa kula wadaagi doonta waxaad u baahan tahay si aad u hesho kafaala qaadayaal (haddii aad rabto), qorsheyso waxyaabaha ku jira, iyo dhammaan hantida aad u baahan tahay inaad ku guuleysato.
Sida Loo Maareeyo Sawirrada Macaamiil Badan - Dhamaanteen waan ognahay inta ay qaadaneyso in la sameeyo naqshadeynta hal astaan. Laakiin ka warran markaad maamuleyso noocyo badan? Waxay noqon kartaa caqabad in la ilaaliyo joogteynta sumcadda oo aad ku sii nagaato shuruudaha garaafka ee dhammaan wax soo saarka bulshada, dhijitaalka iyo khadadka. Kulankaan, Annette McDonald waxay dhex mari doontaa socodka shaqada ee aad dejin kartid si aad u awood u siiso hay'addaadu inay noqoto mid aad ufiican, iyo inaad cabirto, adoo awood siinaya koox kasta oo saaxiibkeed ah inay lawareegaan sameynta waxyaabo muuqaal ah oo muuqaal leh oo macaamiisha kasta ah si fudud !
Sida Loo Furo Istaraatiijiyadda Lagu Kobciyo Wakaaladdaada - Maxay kuwa waxqabadka sare sameeyaa si ka duwan si ay u kobciyaan hay'adahooda? Kaliya maaha 'maxay' laakiin 'sidee' ayey u qabtaan, sanadba sanadka ka dambeeya, rubuc-rubuc iyo bil-bil-bil. Nidaamyada iyo hababka loo baahan yahay waxaa shaaca ka qaadi doona Robert Craven. Oo si la yaab leh tani maahan cilmiga gantaalaha ama aragtida xariifnimada-xeel-dheer. Waxaan la wadaagi doonnaa aaladaha ay kumanaan hay'adood oo waxqabad sare leh ay adeegsadaan.
Sida loo maareeyo Qandaraasyada Macaamiisha & Sharciga Xuquuqda Qoraalka - Adiga oo ah milkiil wakaalad, waxa ugu dambeeya ee aad rabto inaad ka fikirto waa qandaraasyo ama dano xagga sharciga ah, laakiin waqtiga sii qaadashada si aad u hubiso inaad qandaraasyo qaabeysan ku dhisan tahay, oo aad ku cusbooneysiineyso sharciyada ugu dambeeya ee xuquuqda daabacaadda sida ay quseyso waxyaabaha ku jira warbaahinta bulshada, ayaa kaa caawin kara inaad ka ilaaliso arrimaha qaaliga ah ee wadada. Kulankaan xog uruurinta leh, waxaad wax ka baran doontaa qareenka aadka loo raadinayo, afhayeenka iyo qoraaga Mitch Jackson, waxaadna ugala socon doontaa fahan cad oo ah goorta loo adeegsanayo qandaraasyada shaqada wakaaladdaada, waxa lagu darayo, iyo sida looga fikiro sharciga xuquuqda daabacaadda ee suuq geynta dijitaalka.
Sida loo Maareeyo Xayeysiiska Facebook ee macaamiisha - Waxay ka badan tahay uun akhlaaqda. Ka fogow dabinnada ka dhalan kara xisaabaadkaaga macmiilka ama koontadaada Wakaaladda oo laga xannibo xayeysiinta Facebook. Baro sida saxda ah ee loo dejiyo loona galo macaamiishaada xisaabaadka Facebook si ay kuugu ilaaliso Hay'ad ahaan isla markaana aad ugu ilaaliso dhammaan xisaabaadkaaga inay yihiin kuwo wanaagsan. Ku soo biir Amanda Robinson - The Digital Gal oo baro sida si ammaan ah loogu maareeyo Goobaha Ganacsiga, Bogagga, Xisaabaadka Xayeysiinta, Pixels, Catalogs iyo inbadan oo ka wakiil ah macmiilka.
Hay'adaha: Sideed U Abuuri Kartaa Guusha, Goobta Xogta Lagu Wado? - Laga soo bilaabo isbeddelka habka ay magacyadu u fuliyaan howlaha ganacsiga, u wareegidda u jeedka ku lug lahaanshaha dhijitaalka, COVID-19 wuxuu albaabada u furay labada caqabadood iyo fursadaha hay'adaha iyo macaamiisha. Haatan si ka badan sidii hore, wakaaladuhu waxay dib-u-cusbooneysiinayaan naftooda si ay u gutaan baahida sii kordheysa iyo la qabsiga ee macaamiishooda iyo rajadooda. Helitaanka fursado ganacsi oo cusub, wax ka qabashada tartamada sii kordhaya, iyo kala duwidda macaamiishooda macaamiisha ayaa ah qaar ka mid ah caqabadaha ugu waa weyn ee soo food saara hay'adaha. Markaa si aad uga gudubto caqabadahaas oo aad ugu sarreyso ciyaartaada, waxaa lagama maarmaan ah inaad naftaada u qalabeysid aaladda saxda ah ee xogta wadata! Kulankaan, Aurelien Blaha ayaa kaa caawin doona inaad ogaato sida raadinta taariikhiga ah ee Digimind ay kaaga caawin karto inaad si weyn u yareyso waqtiga aad ku bixin laheyd diyaarinta garoonka, inaad ahaato mid ku habboon oo ku kalsoon kalsoonida xogta ku saleysan, iyo inaad u keento waxyaabo cusub oo dhiirrigelin ah .
Ku hubi ajandaha oo dhan dhawr iyo toban kal-fadhiyo kala-goys ah iyo wadahadallo! Sidoo kale, waxaa jira isku xirnaan, waabab wax soo saar, iyo banaanbaxyo wax soo saar!
Isdiiwaangeli Summit Hay'ad
Daah-: Douglas Karr waa safiir isuduwayaasha munaasabada, Agorapulse, waxaanan u adeegsaneynaa xiriiriyeyaasha raadraaca ee ogeysiinta dhacdadan.
Tags: hay'addashir madaxeedka hay'addaagorapulseannette mcdonalddigiminddigital galJason swenkkelly noble mirabellalee goffmitch jacksonshirarka internetkaRobert damac badanwakaaladda warbaahinta bulshadashir madaxeedka hay'adda warbaahinta bulshadashirka khadka tooska ah ee warbaahinta bulshada